Sida user Mac ah qof la kulmi karaa dhowr qaladaad si loo hubiyo in codsiga sida qashinka iyo mid ka mid ah uu ku yaalaa on desktop-ka loo magacaabay marna loo madhiyo habka ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in qofka arrintan la xiriira la kulmaan in nidaamka ayaa la xayiray ama qalad lama filaan ah qaar ka mid ah waxay dhacdaa marka doorasho qashinka ammaan ah ayaa loo isticmaali jiray. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in ciidanka ikhtiyaarka madhan waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira waxaa lagu helay oo la qaban karo la sameeyo caawimo ah fursad kale oo uu soo magacaabay qashinka ciidanka madhan iyo tutorial tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka aan helay oo kaliya laakiin user sidoo kale helo doonaysay inay sameeyeen wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale ay ku dhaqmaan daryeelka xad dhaaf ah sida qashinka oo uu soo forcedly madhiyo aan la soo kabsaday karaa codsiga ah hab dhaqameed oo kaliya ee hababka sanduuqa caawin kara user si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo arrintan la xiriira.
Waa maxay sababta in uu ku qasbo qashinka madhan mararka qaarkood?
Waxaa la soo sharxay in buuxa in user iyo farsamo la xiriira in lagu dabaqo arrintan la xiriira waa kuwa u oggolaan user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in ay sabab u tahay qaar ka mid ah Dicumintiyo farsamo habka soo jireenka ah ee qashinka madhan uma shaqeeyo habka ugu wanaagsan oo sabab la mid ah user ee loo baahan yahay si loo hubiyo in hab aan dhaqanka waxaa laga codsadaa in la hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti ma at dhan gudahood. Waxaa sidoo kale in la xuso in debcinta nidaamka iyo baadi lama filaan ah qaar ka mid ah oo la xiriirta habka soo jireenka ah ee faaruqinta qashinka waa wax sidoo kale keentaa user in ay ku qasbi madhan qashinka oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Force qashinka madhan ayaa sidoo kale ku lug leedahay qaar ka mid ah tallaabooyinka farsamada casriga ah in user a raaco waa in arrintan la xiriira si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta oo natiijada ugu wanaagsan ayaa sidoo kale helay in arrintan la xiriira. Qaybaha dambe ee tutorial ka dhigi doonaa in la hubiyo in user ka helo bandhig feature ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Sida loo sameeyo hawsha?
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka keliya ee la raaci karo oo ah waxaa jira caawiyo gacanta wanaagsan oo tutorial tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in user helo geeddi-socodka xudunta u ah ciidamada madhan qashinka on Mac oo aan wax dib u dhac, arrinta iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in tallaabooyinka Waxaa halkan ku xusan ayaa sidoo kale ku weheliyay Screenshot ee arrintan la xiriira taas oo ka dhigaysa hubiyo in user heli ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay oo aan qaab ciyareedkiisa oo dhan. Xitaa user a laylis awood u yeelan doonaan in ay isticmaalaan iyo codsan habka kaliya fiirin ee Screenshot in lagu gundhig u user in la sameeyo wax fiiriyaa fudud oo kaarku lacag la'aan ah:
1. Codsiga terminal waa in la bilaabay iyadoo la kaashanayo adeegyada folder ka, kaasoo codsigan la soo baadhi karo, waayo si fudud:
2. Marka codsiga ayaa u furan user waa in la hubiyo in amarka uu soo hoos ku qoran waxa ku qoran ka dhigi. Si loogu fududeeyo ee user qoraal ah waa in ay ahaataa sudo fuliyaan shirkad -rf ~ / .Trash / * si aad u samaysay wixii kaloo ah.
3. Marka la sameeyo, waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira arki kartaa in folder qashinka oo uu soo ku yaalla gal desktop-ka ayaa loo madhiyo oo aan wax arrinta afjaridda habkan sidoo:
Haddii ciidanka madhan ayaa la sameeyey si shil ka dibna waxa la sameeyo
Wakhtigan waa qalad ah oo wajiga user ah in arrintan la xiriira iyo in la hubiyo in sida ugu fiican ee la qabtay si nidaamka iyo telefoonka waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ay Wondershare Data Recovery for Mac waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in ugu fiican iyo gobolka qalabka farshaxanka waxaa loo isticmaalaa si aad u hesho waxyaabaha la doonayo sameeyo gudahood waqtiga ugu yar. Waxaa dhab ahaantii waa gobol ka mid ah qalab farshaxan ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo shaqo sameeyey oo aan ka kaaftoomi kasta oo gudahood markii ay suurto gal ugu yaraan sida qalab lagu gundhig gudahood barnaamijka hubiyaa in geeddi-socodka lagu soo kabashada xogta noqdo fudud sida karaankeeda Waxa kale oo la arkaa in ay tahay habka ugu wanaagsan ee midabbo:
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html user waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi sameeyo:
2. Doorashada badiyay kabashada file waa ka dibna in la soo xulay si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. In talaabadan user ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in drive halkaas oo khasaaro xogta ka dhacay waxaa loo doortay iyo nidaamka waxaa sidoo kale la marsiiyey:
3. Marka barnaamijku ku soo beegmay la xogta soo kabsaday mid ka mid ah in uu yahay in la sii hayo waa la soo saari karaa oo user waa in la hubiyo in kale waa la dibabaxayaal sameeyo:
> Resource > Mac > Sida loo qasbi madhan qashinka aad Mac